Samachar Batika || News from Nepal » कसले लु’ट्दैछ तपाईंको हाँसो ?
कसले लु’ट्दैछ तपाईंको हाँसो ?
साँच्चै, तपाईं दिनभरमा कति हाँस्नुभयो ? कसरी हाँस्नुभयो ? कुन प्रसंग वा विषयले तपाईंमा हाँसो ल्यायो ? के गर्दा तपाईं हाँस्नुभयो ?
धेरै टाढा नपुग्नुहोस् । हिजोको दिन सम्झनुहोस् । हिजो बिहान उठेदेखि राति सु’त्ने बेलासम्म तपाईं कति हाँस्नुभयो ?
तपाईंले मनमनै गणना गर्नुभयो सायद । बिहान उठ्नसाथ तपाईं कुनै घरायसी प्र’संगले हाँस्नुभयो । श्रीमती/श्रीमानबीच कुनै ख्या’लठ्टटा भयो । वा बच्चाको प्र’संगले तपाईंमा हाँसोको फोहोरा छु’ट्यो । दिउँसो कार्यथलोमा पनि तपाईं बेलाबखत हाँस्नुभयो । साथीभाईंसँग ‘फो’कट गफ’ गरेर हाँस्नुभयो । कामको सिलसिलामा त्यस्ता हाँसउठ्दो कुनै प्र’संग फेला परेर पनि हाँस्नुभयो ।
यसैगरी सोच्नुहोस् त दिनभरमा कति पटक रि’स उठ्यो ? कति पटक झ’र्को लाग्यो ? कति पटक उ’दास हुनुभयो ? कति पटक ह’तोत्साही हुनुभयो ?
दिनभरमा तपाईं जति समय हाँस्नुभयो, जति समय फुरुंग हुनुभयो, जति समय उ’मंगित हुनुभयो सायद त्यसको तुलनामा तपाईं बढी उ’दास र ह’तास पो हुनुभयो कि ? दुः’खी र चि’न्तित पो हुनुभयो कि ? क्रो’धित र आ’क्रमक पो हुनुभयो कि ?
अ’क्सर हामीमा जति धेरै समय खुसी, उ’मंग र उ’त्साह रहन्छ, त्यो भन्दा बढी समय दुः’ख, नि’रासा, चि’न्ता, क्रो’ध, हि’नता रहन्छ । यही कारण त हरक्षण हाम्रो अनुहारमा हाँसो पो’तिएको हुँदैन । बरु नि’रासा लि’पिएको हुन्छ ।
त्यसो त दुः’ख थियो, अ’भाव र स’मस्या थियो । यसबीचमा पनि हामी बेलाबखत हाँस्यौं । अँ त किन हाँस्यौ ?
किन हाँस्यौ ? हामी के कुरामा हाँस्यौ ?
संभावित जवाफ यस्तो हुनसक्छ । कुनै घ’तलाग्दो कुरा सुनेर । रमाइलो जोक सुनेर । कुनै भ’द्दा प्र’संग सुनेर ।
सोच्नुहोस् न हाँस्दा हाम्रो के नै जान्छ ? के ख’र्च हुन्छ ? के न’ष्ट हुन्छ ? के ब’र्वाद हुन्छ ? हाँ’सिदिए पुग्दैन र ?
कतिपय प्र’संग, घ’टना, बोली, व्यवहार यस्ता हुन्छन्, जसले हामीमा हाँसो पै’दा गर्छ । हाँस्नु मानविय स्वभाव हो । यसकारण कुनैपनि त्यस्ता प्र’संगमा हामी हाँस्छौं, जो हाँसो पै’दा गर्ने किसिमको होस् । अब प्रश्न उठ्छ कि त्यस्ता प्र’संग, घ’टना, बोली वा व्यवहार नहुनु भने हामी हाँस्नै छाड्ने ?
हाँस्नु हाम्रो मानविय स्वभाव हो भने यसलाई आफ्नो बानीमा किन रुपान्तरण नगर्ने ? दिनभरमा नि’रासा, उ’दासी रहन छा’डेर धेरै जसो समय हाँस्ने हो कि ? मुस्कुराइरहने हो कि ?
कस्तो हाँसो ?
हामी दिनभर केही न केही प्र’संगले, बोली-वचनले हाँस्यौं । तर, कस्तो हाँसो हाँस्यौं ? हाँस्नुको गु’णवत्ता महत्वपूर्ण छ ।
कसैको ओंठमा मात्र हाँसो देखिन्छ । कसैको हाँसो पनि रु’न्चे हुन्छ । कोही ब’लजफ्ती हाँस्छन् । कोही अ’ट्टहास हाँस्छन् । कोही ब’नावटी हाँस्छन् । तपाईंको हाँसो कस्तो छ ?
वास्तवमा त्यही हाँसो काइदाको हो, जो उ’न्मुक्त एवं वि’न्दास हुन्छ । शा’लिन र भव्य पनि हुन्छ । यस्तो हाँसो स्वतस्फूर्त र प्राकृतिक हुन्छ । हो, यही हाँसो हो औषधी । यस्तो औषधी जसले तपाईंको शरीरलाई प्राकृतिक रुपमै उपचार गरिदिन्छ । रोग नि’र्मुल गरिदिन्छ । शरीरलाई स्वास्थ्य राख्छ । मनलाई फु’रुंग बनाउँछ । मनलाई त’नावमुक्त बनाउँछ ।
यस किसिमको हाँसोले तपाईं मात्र होइन, तपाईंको वातावरणलाई पनि मो’हक बनाइदिन्छ । जब तपाईं यस्तो शालिन, भ’व्य, उ’न्मुक्त र स्वतस्फूर्त हाँसो हास्नुहुन्छ, तपाईंको अघिल्तिर उभिएका मान्छेहरु उ’दास रहनै सक्दैनन् । दुः’खी हुनै सक्दैनन् । उनीहरु पनि त्यसै त्यसै फु’रुंग हुन्छन् ।
मान्छे मात्र होइन, तपाईंको अघिल्तिर कुनै जनवार, जस्तो कुकुर, गाईंबस्तु छ भने उनीहरुले पनि आनन्दित म’हसुष गरेको हामीले अ’नुभूत गर्न सक्छौं । सोच्नुहोस् त तपाईं जब उ’न्मुक्त हाँस्नुहुन्छ, रि’स कहाँ भाग्छ ? त’नाव कहाँ लुक्छ ? भ’य कहाँ हराउँछ ? उ’दासी कहाँ बि’लाउँछ ?
सोच्नुहोस् त तपाईं जब उ’न्मुक्त हाँस्नुहुन्छ, रि’स कहाँ भाग्छ ? त’नाव कहाँ लुक्छ ? भ’य कहाँ हराउँछ ? उ’दासी कहाँ बि’लाउँछ ?
अब बुझ्नुभो नि हाँसोको प्र’भाव । जब तपाईं गजबले उ’न्मुक्त हाँस्नुहुन्छ, त्यसको सोझो प्र’भाव मुटुमा पर्छ । मुटुको कार्यसंचालन सहज हुन्छ । र’क्तप्रवाह राम्ररी हुन्छ । यस्तो हाँसोले तपाईंको फोक्सोमा पनि ताजा अक्सिजनको प्र’वाह बढाइदिन्छ ।
अब मा’नसिक कुरा गरौं । जब तपाईं गजबले उ’न्मुक्त हाँस्नुहुन्छ, तनाव, पी’डा, दुः’ख, पी’र सबै एकाएक गा’यब हुन्छ । तपाईं उ’मंगित र फु’रुंग हुनुहुन्छ ।
कसले लु’ट्यो हाँसो ?
तर, हामी यसरी हाँसेकै छैनौं । हाँस्ने कुरामा पनि हामी हाँसो द’बाइरहेका छौं । मनमनै हाँस्छौ । मुसुमुसु हाँस्छौं । धेरैजसो त हामी अरुको लागि हाँसिदिन्छौं । ब’नावटी हाँसो । कृ’तिम हाँसो । हाम्रो हाँसो देखेर बरु अरुलाई हाँस उठ्ला ।
खै किन हो, प्रकृतिले सित्तैमा दिएको हाँसो पन्छाएर हामी दिनभर गं’भिर हुन्छौं, सं’वेदनशिल हुन्छौं, भा’वुक हुन्छौं । हाम्रो अनुहारमा हाँसो वा मुस्कुराहट नै हुँदैन ।
हाँसो आफैमा एक ओखती हो भन्ने नबुझेको होइन । हाँस्दा आफु मात्र होइन, आफ्नो माहौल नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि नजानेको होइन । तर, किन हामी हाँस्न क’ञ्जुस गर्छौं ? किन हामीलाई हाँस्नका लागि पनि मौ’का कुर्नुपर्ने ? हाम्रो हाँसो कसरी लु’टियो ? हाम्रो हाँसो कता गा’यब भयो ?
यी सबै जवाफ तपाईंले अरुसँग होइन, आफैभित्र खोज्नुपर्छ । तपाईंको हाँसो हराउनुमा मूख्य अ’भियुक्त तपाईं नै हो । तपाईंको कारण तपाईंको ओंठमा मुस्कुराहट हराएको हो । आफैमाथि आ’रोप लाग्दा तपाईंलाई झों’क चल्नसक्छ । तर, यो सत्य हो । सत्य ती’तो नै हुन्छ ।
सोच्नुहोस् न हाँस्दा हाम्रो के नै जान्छ ? के ख’र्च हुन्छ ? के न’ष्ट हुन्छ ? के ब’र्वाद हुन्छ ? हाँसिदिए पुग्दैन र ?
न किन्नुपर्छ, न खोज्नुपर्छ । हाँसो हामीसँगै छ त । के हामी हाँस्यौ भने हाम्रो समस्या अरु ब’ल्झन्छ ? ऋ’ण अरु थपिन्छ ?
हो, हामीसँग समस्या छ, अ’भाव छ, दुः’ख र पी’डा छ । यी कुराहरु सम्झेर हामीलाई हाँस्न भन्दा बढी रु’न मन लाग्छ । तर, रु’नु, दुः’खी हुनु, उ’दास रहनु कुनै समधान त होइन । हाम्रो मा’नसिक स्थि’तीले कुनै भौतिक समधान त गर्दैन । हामी त यसरी नि’रास र उ’दास रहन्छौ कि, मानौ त्यसले ठूलै समस्या हल गरिदिन्छ ।
संसारमा सात अर्ब मान्छे छन् । यसमध्ये कोही यस्ता छैनन्, जसको जीवनमा समस्या छैन । दुः’ख र पी’डा छैन । अब सबैजना रो’इकराई गर्ने त ? दुः’खी भइरहने त ?
होइन, दुः’खी हुनु समस्याको हल होइन । यसले त अरु समस्या बढाउँछ । तपाईंको मा’नसिक समस्या बढाउँछ । रोग बढाउँछ । त्यसो भए किन नहाँस्ने ?
हाँसौं मन खोलेर । (श्रोत:इनलाइन खवर )
प्रकाशित मिति २७ चैत्र २०७६, बिहीबार ०३:३०